Ngenxa ukukhula Amazing yamanani for igesi nogesi eminyakeni yamuva abaningi ethandwa phakathi izakhamuzi zethu nabo kuba ukusetshenziswa kwezinye izindlela ezihlukile ezingasetshenziswa ekhaya bafudumale. Ikakhulukazi, omunye wabo kukhona okuqinile fuel boilers eside evutha. Izibuyekezo babo abathi ukuthi isicelo lemasu ivumela izikhathi eziningana ukunciphisa Ukushisa izindleko.
Lokhu kubalulekile ikakhulukazi ezindaweni ngokuvamile azikho igesi main futhi bafudumale electric akunakwenzeka okungenani ngenxa isimo esidabukisayo ugesi.
Kodwa ingabe sikhona isizathu esenza umuntu kancane kancane kubuyela zokubasa bendabuko okuqinile? Phela, abantu abaningi ezweni lethu Namanje usebenzisa izinkuni Ukushisa, kodwa abawona ujabule kakhulu ngaleli qiniso! Nokho, sizozama ukumambula labo imininingwane izinzuzo ukuthi yesimanje okuqinile fuel boilers eside evutha. Izibuyekezo bathi ngowokuqala lezi izimfanelo ezinhle kuzimele njalo liphuma intengo gas.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo akufanele kusenze ubudlelwane bakho amaziko ubudala, njengoba lezi boilers zenziwa usebenzisa ubuchwepheshe bamuva. Ikakhulukazi, igama elithi "esivuthayo eside" ibonisa ukuthi ukusha fuel kuzo usebenzisa okuthiwa "ukuwohloka phezulu" lapho wajinge wanamatsela ezishile ngokusebenzisa ngokuqhubekayo ukukhulula amandla esiphezulu.
Yiqiniso, kulesi simo, uzochitha ku Ukushisa siyimali ingasaphathwa. Yingakho okuqinile fuel boilers eside esivuthayo, ukubuyekezwa okuyizinto ngakho okuhle, sekuyinto evamile ukuba kakhulu eYurophu.
Ngokufaka imishini enjalo, ungakwazi bayakhohlwa kokuba ukubeka izinkuni phezu komlilo, sihlale njalo siqaphele yokuma binda, ingozi ubuthi by-carbon monoxide uma kwenzeka iphutha. Banikezwe ezingeni ezishintshayo e boilers yesimanje, isamba elanele fuel bangakwazi usebenza amasonto, njalo egumbini otaplivaya futhi cishe ngaphandle kokudinga noma iyiphi i-kwabaqaphi.
By endleleni, ngenxa yalesi sizathu, okuqinile fuel boilers eside evutha Ukushisa uthanda ukufaka suburban bashiye imizi yabo bayizakhamuzi banxuse isitofu bendabuko kunzima.
-Simo esishubile Okugcwele
Cishe yonke imishini evamile yalolu hlobo akuxhomekile zangaphandle imithombo yamandla. Ngamafuphi nje, sidinga kuphela izinkuni, kuyilapho ukufinyelela kwenethiwekhi ugesi akusizi. Nokho, uma ufaka kwegazi futha ugesi kuyadingeka kunoma isiphi isimo.
Uma ufuna ukulondoloza, abancikile ezingosini ze eliphezulu bafudumale umfaniswano izindlu, nophethiloli kuleli cala uzosuka akuyona isibonelo ngaphezulu. Wenza okuhlukile kungase kubhekwe icala lapho okuqinile fuel boilers esivuthayo eside, okuyinto libuyekeza uqinisekise lesi, wafaka izindlu ezincane.
Uma uhlala endaweni nge iziphazamiso njalo kwegezi, kuyinto efiselekayo ukunikeza amabhethri enamandla futhi uninterruptible segezi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma usebenzisa ezimbili wesifunda okuqinile fuel boilers esivuthayo eside.
Indlela ukususa Dr. Web neyekhompyutha noma ikhompyutha ephathekayo.